Peter Moe အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Peter Moe အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Peter Moe အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၆:၄၇ ၁၆:၄၇၊ ၁၃ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၅‎ အရေးမကြီး ရှိုင်းသူရ (ဘောလုံးသမား) ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၆:၄၄ ၀၆:၄၄၊ ၁၃ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၈‎ ရှောလူး ‎ →‎မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခြင်း: Ellen Mitchell လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၉:၂၄ ၁၉:၂၄၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎No edit summary စာတွဲများ: မျက်မြင် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၉:၀၆ ၁၉:၀၆၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၉:၀၅ ၁၉:၀၅၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၅‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၅၄ ၁၈:၅၄၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈၈‎ ရှောလူး ‎ He was the first ever Burmese to receive Master of Art degree too. စာတွဲများ: မျက်မြင် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၈:၄၉ ၁၈:၄၉၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၉၀‎ ရှောလူး ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၄၆ ၁၈:၄၆၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎ →‎အမေရိကားသို့ ရောက်ရှိခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၄၄ ၁၈:၄၄၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၄၅‎ ရှောလူး ‎ →‎ငယ်ဘဝ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၂၉ ၁၈:၂၉၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ ရှောလူး ‎ →‎ပညာသင်ကြားခြင်း: Tharrawaddy Min was already dead in 1856. So I corrected it. စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၂၃ ၁၈:၂၃၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၇‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎ →‎ပညာသင်ကြားခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၂၁ ၁၈:၂၁၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂၇‎ ရှောလူး ‎ →‎အမေရိကားသို့ ရောက်ရှိခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၈:၀၈ ၁၈:၀၈၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၆‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎ →‎အမေရိကားသို့ ရောက်ရှိခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၇:၄၄ ၁၇:၄၄၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၃‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎ →‎ပညာသင်ကြားခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၇:၃၇ ၁၇:၃၇၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၉‎ ရှောလူး ‎ citation added စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၇:၃၆ ၁၇:၃၆၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၅၁‎ ရှောလူး ‎ The first Burmese ever in America စာတွဲများ: မျက်မြင် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၇:၀၀ ၁၇:၀၀၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၈‎ အရေးမကြီး ရှောလူး ‎ →‎အမေရိကားသို့ ရောက်ရှိခြင်း စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၅၁ ၁၆:၅၁၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇‎ ရှောလူး ‎ →‎ပညာသင်ကြားခြင်း: Cleveland Medical College စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၅၀ ၁၄:၅၀၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅၆‎ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ‎ →‎ထင်ရှားသော ကျောင်းသားဟောင်းများ: သန်းတိုးအောင် လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၃၁ ၁၄:၃၁၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၁‎ မျိုးလှိုင်ဝင်း (ဘောလုံးသမား) ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၁၂ ၁၄:၁၂၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၈‎ အရေးမကြီး ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၀၉ ၁၄:၀၉၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၅၅‎ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၀၃ ၁၄:၀၃၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၈‎ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ‎ →‎ပညာရေး စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၄:၀၃ ၁၄:၀၃၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၇၀‎ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ‎No edit summary စာတွဲ: Visual edit: Switched
၁၃:၅၅ ၁၃:၅၅၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၇၀‎ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ‎No edit summary စာတွဲများ: မျက်မြင် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၃:၃၇ ၁၃:၃၇၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၉၃‎ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး ‎ ထင်ရှားသော ဂေါ်ရခါးလူမျိုးများ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၅၃ ၁၃:၅၃၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၃၉‎ ထွန်းမြင့် (လင်းခေး) ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၁၇ ၁၃:၁၇၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ အရေးမကြီး အ.ထ.က(၉)မန္တလေး ‎ →‎ထင်ရှားသောကျောင်းသားဟောင်းများ လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၁၆ ၁၃:၁၆၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄၅‎ အ.ထ.က(၉)မန္တလေး ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၁၁ ၁၃:၁၁၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၂၉‎ အ.ထ.က(၉)မန္တလေး ‎ ထင်ရှားသောကျောင်းသားဟောင်းများ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၀၇ ၁၃:၀၇၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၅၉‎ ဇော်မြင့်မောင် ‎ အထက်တန်းကျောင်း လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၂:၄၈ ၀၂:၄၈၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈၀‎ အရေးမကြီး ဆားထုံဆရာတော် ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၂:၄၈ ၀၂:၄၈၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၃‎ အရေးမကြီး ဆားထုံဆရာတော် ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၅ ဧပြီ ၂၀၂၂
၁၇:၂၁ ၁၇:၂၁၊ ၅ ဧပြီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၅‎ ဇာဂနာ(ရုပ်ရှင်နှင့် သဘင်ပညာရှင်) ‎ proper citation added လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅:၂၂ ၁၅:၂၂၊ ၂၇ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၄၉‎ အရေးမကြီး မွန်လူမျိုး ‎ →‎ထင်ရှားသော မွန်လူမျိုးများ လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅:၁၃ ၁၅:၁၃၊ ၂၇ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၇၀‎ အရေးမကြီး ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅:၁၂ ၁၅:၁၂၊ ၂၃ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ‎ →‎ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမြန်မာမွတ်စလင်များ လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅:၁၂ ၁၅:၁၂၊ ၂၃ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၆၉‎ အစ္စလာမ်ဘာသာ ‎ →‎ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမြန်မာမွတ်စလင်များ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၄၃ ၁၆:၄၃၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၄၈‎ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် ‎ →‎မြေနေရာရွေးချယ်ခြင်း လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၃၄ ၁၆:၃၄၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၂‎ မော်လမြိုင်လေဆိပ် ‎ →‎ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၂၉ ၁၆:၂၉၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁‎ အရေးမကြီး မော်လမြိုင်လေဆိပ် ‎ →‎ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၂၇ ၁၆:၂၇၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၉‎ မော်လမြိုင်လေဆိပ် ‎ →‎ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၂၅ ၁၆:၂၅၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၄၄‎ မော်လမြိုင်လေဆိပ် ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၀၉ ၁၆:၀၉၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉‎ အရေးမကြီး မော်လမြိုင်လေဆိပ် ‎No edit summary စာတွဲများ: မျက်မြင် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၆:၀၃ ၁၆:၀၃၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၆၂၉‎ မော်လမြိုင်လေဆိပ် ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၃:၅၄ ၁၃:၅၄၊ ၁၈ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၀၅၅‎ ထိန်ဝင်း၊ ဗိုလ် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်) ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၇:၃၂ ၁၇:၃၂၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး လားရှိုးသိန်းအောင် ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၆:၀၁ ၁၆:၀၁၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃၃‎ လားရှိုးသိန်းအောင် ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅:၅၈ ၁၅:၅၈၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၀၇‎ လားရှိုးသိန်းအောင် ‎No edit summary စာတွဲများ: မျက်မြင် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
၁၅:၄၉ ၁၅:၄၉၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၈‎ လားရှိုးသိန်းအောင် ‎No edit summary စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
Peter Moe: စာမျက်နှာခွဲများ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Peter_Moe" မှ ရယူရန်